Los 3 mejores libros de Oliver Sacks › julio 2022
Xa iincwadi zesayensi kwisayensi yakhe ziba luhlobo lwe Abathengisi abafundisayoNgaphandle kwamathandabuzo kungenxa yokuba sijamelene nomlobi onomdla wokuphalaza ulwazi lwakhe kuye nakubani na ofuna ukutyhila, nkqu nemikhombandlela yokuqala okanye ezona zinto zibonakalisiweyo zibonakalayo, izinto eziyinyani ezinomdla kulwazi lwakhe. Kwaye enye yezo nzululwazi yayizimisele ukuveza isibheno sobulumko bakhe yayiliNgesi elidumileyo UOliver Sacks.
La ubuchwephesha, lowo waqaqambisa iintsuku zakhe zokuqala enomdla Ukusuka eSantiago Ramón y Cajal, ifumana kwiiNgxowa iingcinga ezibalaseleyo ezixhalabisayo zingaphaya kokufundisa okanye icandelo lophando ukuphakamisa iimeko ezintsha kuyo nayiphi na intsimi.
I-neurological yenza indalo engekaziwa ngokupheleleyo. Kwaye phakathi kwezibane zayo kunye nezithunzi Iingxowa zifumene loo nto yokubhala ngokukhawuleza ukuba ingene kwizifo ezithile okanye kwizifundo ezifanelekileyo njengoko ziqhubeka kuphando olusemgangathweni oludibanisa ne-anthropological.
Njengaye nawuphi na umdali obalaseleyo onomdla wokubhala enolwazi olupheleleyo lwezibakala, uSacks wazenzela iimeko zakhe zemithambo-luvo kunye nokuthintelwa kwakhe ngokweemvakalelo okwathi kwakha umfutho wokunika ubomi bakhe kuphando. I-praxis yayo, ukuyibiza ngandlela thile, ngamanye amaxesha yavuselela ukuthandabuza koluntu lwenzululwazi.
Iziphumo ezongezelelekileyo ze-corporatism ezimisele ukugcina ulwazi kunye nokuhambelana neenkqubo ezimiselweyo kunenkxalabo yovavanyo efana nentsimi enje.
Ngamanye amaxesha ndiye ndathetha ngobudlelwane obunomdla phakathi kweyeza noncwadi. Ubudlelwane apho sifumana ababhali njengabahlukeneyo njenge EChekhov, IPio Baroja, URobin Cook, Connan doyle o Hosseini. Kwimeko kaOliver Sacks, uncwadi luba yinzululwazi kwaye isayensi ibhalwa ngomnxeba woncwadi.
Iincwadi ezi-3 eziphezulu ezinconyelweyo ngu-Oliver Sacks
Indlela yam eya kule sayensi ibangelwa yimuvi yakudala enegama elifanayo ebhalwe kule ncwadi. Incwadi eyafika ezandleni zam kwiminyaka emininzi kamva, xa ndingazange ndiyikhumbule imovie kwaye lo mbandela ubuyisele kum i-avant-garde yomfana olingelo lakhe esingakhange silive kwakhona.
Kungenxa yokuba iingxowa, emva phayaa ngo-1969, zabuyisela ebomini ezinye izigulana zeekati ezashiywa zingenakwenzeka sisayensi esemthethweni. Ayisiyiyo yonke into eyimpumelelo enkulu kulingo lwechiza elitsha. Kodwa ukusuka kwimeko yokupheliswa ngokupheleleyo ukuya ekubuyiseleni iimvakalelo zobomi apho i-neural stimuli isebenza kwakhona yayothusa wonke umntu.
Ngakumbi nangakumbi ukuba sithathela ingqalelo ukuba ezi zigulana zichithe ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini kobu bomi ngenxa yesifo se-encephalitis. Incwadi ebukhali ukuqala ngale nzululwazi.
Indoda egqibe umfazi wayo ngomnqwazi
Njengesihloko, lo msebenzi ubonelela ngoluvo olubi lokuba uyabanga. Ngaphandle kwamathandabuzo ngenxa yokufuna ukwazi, ikumema ukuba uyifunde. Yintoni eza emva kokugcina i-tonic yecandelo elithile kunye nezobuchwephesha, loo njongo yokusasaza ihambelana nophuhliso lwethisisi ethi nayiphi na incwadi yophando ihlala ibonelela. Inani lezigulana ezingamashumi amabini zizayo, ukuza kwazo okanye ilahleko yazo ngokupheleleyo kwisalathiso sehlabathi lethu.
Ngamanye amaxesha kubonakala ngathi iingxowa zifuna ukutyhila ibhalansi engaqhelekanga phakathi kokugqwetha okwenyani kunye namandla angaqhelekanga.
Ukuba akunjalo ngenxa yokungakholelwa kwakhe kubukho bukaThixo, kubonakala ngathi iiSacks zazikhomba kuThixo phakathi kokuhlekisa nokuziphindezela onika isipho kwaye alungise ukungalingani, konke kwingqondo apho ii-neurons zibhala umhlaba othile abawubhalileyo kwi-DNA.
Ukuchaphazeleka kwezifo ezihlaselwe ngabangama-protagonists abangamashumi amabini kusibonisa umbono opholileyo wesona sixhobo sinamandla, ubuchopho obunemilingo efihla zombini iimfihlelo ezinomtsalane kunye neenkolelo ezibuhlungu.
Ndandi ndithandabuza ukuba ndibeke le ncwadi kwindawo yesithathu I-Hallucinations okanye oku, i-biografi yohlobo lwe-eccentric yenyani yesayensi kunye nokukhuthaza okungagungqiyo kolwazi lwesayensi.
Ewe kunjalo, ukwazi ubukrelekrele kuhlala bunobunzima. Kuyinyani ukuba kule ncwadi sazi kakuhle izizathu zombhali ezinxulumene nomoya ongazinzanga, ejongene noloyiko lwakhe malunga nokwabelana ngesondo, impambano ebonwa sisifo somzalwana wakhe, amava akhe anzulu kwaye anomdla ukunxibelelana nezinye iziyobisi njengendlela yovavanyo.
Umdibaniso wamava awodwa ekoyiseni kwethu sifumana zonke iimpendulo zalo mbono wendoda yesayensi ekhululwe kwi-taboos, iinkqubo kunye neefomula ezivaliweyo, ngakumbi kwicandelo elibanzi njenge-neurology.
Ngelixa abanye oogqirha abadumileyo, abezopolitiko okanye iimbaleki zinokubhala ezo biopio zesoporific kunye ne-epic ebakhokelele apho njengendlela yokuqeqesha, uSacks wayekhe washiya umphefumlo wakhe ukuba usinike ngokuchanekileyo, umphefumlo wakhe.
Iilebula Iincwadi zesayensi, UOliver Sacks
Izimvo ezi-2 "Ezona ncwadi zi-3 zigqwesileyo ngu-Oliver Sacks"
Pingback: Ezona ncwadi zintathu zibalaseleyo zikaViktor Emil Frankl ›Meyi 3
Pingback: Ungaphoswa ziincwadi ezilungileyo zikaJared Diamond> 2021